February 5, 2021 - Pyone Pyone Lay
တစ်ကြိမ်တည်း လုပ်ရုံနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့ သခွားသီး နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
တစ်ကြိမ်တည်း လုပ်ရုံနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့ သခွားသီး နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် လှတဲ့သူတိုင်း ဆားဝက်ခြံ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆားဝက်ခြံ ရှိနေတာတော့ ဘယ်သူမှ ကြိုက်ကြမယ်မထင်ပါဘူး။ ဆားဝက်ခြံ တွေဟာနှာခေါင်း၊ မေးစေ့နှင့် ပါးပြင် တွေမှာအများဆုံး ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ညှစ်ရင်လည်းပွါးတတ်တာကြောင့် အတော် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုးဆိုးလျှင် အပေါက်အကြီးကြီးတွေ ဖြစ်ပြီးမျက်နှာမှာ ကြည့်ရ ဆိုးပါတယ် ။ ဆားဝက်ခြံ သက်သာ စေတဲ့နည်းတွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ဒီတစ်ခါ ဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေး ကတော့ လွယ်ကူပြီး ရိုးရှင်းပါတယ်။ဆားဝက်ခြံကို ပျောက်ကင်း စေရုံသာမက အသားအရေကို ဖြူဝင်းပြီး စိုပြေ လာစေပါတယ်။ပထမဦးဆုံးလုပ်ရ …
ဆမလက်မှတ်သာ သိမ်းလို့ရမယ် ရင်ထဲက ယုံကြည်ချက်ကိုတော့ သိမ်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ ဒေါက်တာ
ဆမလက်မှတ်သာ သိမ်းလို့ရမယ် ရင်ထဲက ယုံကြည်ချက်ကိုတော့ သိမ်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ ဒေါက်တာ ဆေးကုသခွင့် ဆမလက် မှတ်သာ သိမ်းလို့ရမယ် ရင်ထဲက ယုံကြည်ချက် ကိုတော့ သိမ်းလို့ မရဘူး တဲ့လေးစားပါတယ် ဒေါက်တာ ရဲရင့်လုံနေ့စဉ် Attendance ကောက်ယူပြီး သတင်းပို့ ရတဲ့ အတွက် ကျွန်တော့် ကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြား ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဟာ တာဝန်ခံ တိုက်နယ် ဆရာဝန် တစ်ဦးအနေ နဲ့ မနိုင်ဝန်ကို ထမ်းခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ် တစ်စုနီးပါး ကြာခဲ့ ပါပြီ။ အိပ်ကောင်းခြင်း မအိပ်ရ ပင်ပန်း လှပေမယ့်ပြည်သူ့မျက်နှာ ကို ထောက်ထားပြီး လုပ်နိုင်တာ ထက်ပိုပြီး အလုပ်လုပ် …
သံပုံးတီး၊ဟွန်းတီးလို့ အဖမ်းခံရရင် အိတ်စိုက်ကာ အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပေးမဲ့ ရှေ့နေလေး
သံပုံးတီး၊ဟွန်းတီးလို့ အဖမ်းခံရရင် အိတ်စိုက်ကာ အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပေးမဲ့ ရှေ့နေလေး မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သံပုံးတီးလို့ ဟွန်းတီးလို့ အဖမ်းခံရရင် အိတ်စိုက်ကာ အခမဲ့ရှေ့နေ လိုက်ပေးမယ့် မန်းလေးမြို့က ရှေ့နေလေး ဒီနေ့သံပုံးတီးလို့ ဟွန်းတီးလို့ လိုက်ဖမ်းတယ်လို့ သတင်းတွေ ကြားတယ်ဗျာ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိမရှိ / မှန်မမှန် ပြောကြပါဦး တကယ်လို့ အမှန်ဆိုရင် မန်းလေးမှာ အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေ (ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီသူတွေရဲ့ မိသားစု၊ ‌ (အစကတော့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက် ရောက်သွားတဲ့ တရားစီရင် ရေးကို. အယုံအကြည် မရှိလို့ တရားရုံး တွေမှာ အမှုမလိုက် တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ ခုတော့ စိတ်ပြောင်းသွားပါပြီ …. အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ထုတ်ပြန် …